तपाइँको सानो घर जग्गा व्यवसाय मार्केटिंग को लागी कसरी भिडियो प्रयोग गर्ने Martech Zone
के तपाईंलाई आफ्नो अनलाइन उपस्थितिको लागि भिडियो मार्केटिंगको महत्त्व थाहा छ? घर जग्गा व्यवसाय?
तपाईं खरीददार वा विक्रेता जस्तो फरक पर्दैन, ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न तपाईंलाई विश्वसनीय र प्रतिष्ठित ब्रान्ड पहिचान चाहिन्छ। नतिजाको रूपमा, रियल इस्टेट मार्केटिंगमा प्रतिस्पर्धा यति ठूलो छ कि तपाईं सजिलै आफ्नो सानो व्यवसायलाई बढावा दिन सक्नुहुन्न।
भाग्यवस, डिजिटल मार्केटिंगले सबै आकारका व्यवसायहरूलाई उनीहरूको ब्रान्ड सचेतना बढाउन धेरै उपयोगी सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। भिडियो मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंगमा एक महत्त्वपूर्ण रणनीति हो र सबै उद्योगहरूको लागि उपयोगी छ, विशेष गरी अचल सम्पत्ती।
यदि तपाईं आफ्नो सानो घर जग्गा व्यवसायलाई बढावा दिन केहि भिडियो मार्केटिंग सजीलो-गर्न सुझावहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने, यो लेख पढिरहनुहोस्।
तपाइँका लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नुहोस् र तदनुसार योजना बनाउनुहोस्
पहिले, तपाईंलाई यो जान्नु आवश्यक छ कि तपाईं कुनै उद्देश्य र योजनाहरू बिना भिडियोहरू बनाउन सुरू गर्न सक्नुहुन्न। भिडियो मार्केटिंग एक मूल्यवान र समय शोषक कार्य हो र यसको पूर्ण र सही रणनीति चाहिन्छ।
भिडियो मार्केटिंगमा काम गर्न अघि, आफ्नो लक्ष्यहरू निर्धारण गर्न समय लिनुहोस् र तिनीहरूमा पुग्नको लागि योजना बनाउनुहोस्। तपाईंले वास्तवमै के हासिल गर्न चाहानुहुन्छ र तपाईंले आफ्नो इच्छित परिणामहरूमा कहिले पुग्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा तपाईंले जान्नु आवश्यक छ।
यहाँ केहि विशिष्ट लक्ष्यहरू छन् जुन तपाईले विचार गर्न सक्नुहुन्छ:
प्रति महिना तपाईंको भिडियोको हेराईहरूको संख्या
यीको लागि व्यावहारिक क्रोधलाई बुझ्नको लागि, तपाईंलाई तपाईंको रियल इस्टेट प्रतिस्पर्धीहरूको नतीजा पत्ता लगाउन प्रतिस्पर्धा खोजी आवाश्यक पर्न सक्छ।
जब तपाईं आफ्ना लक्ष्यहरू निर्धारित गर्नुहुन्छ, तपाईं सोही अनुसार योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। एक मजबूत रणनीति निर्माण गर्न को लागी कोशिश गर्नुहोस् र यसमा टाँसिनुहोस्। अवश्य पनि, तपाईं एक शुरुआतको रूपमा, तपाईंलाई मध्य चरणहरूमा केही संशोधनहरूको आवश्यक पर्दछ।
यथार्थपरक बजेट सेट गर्नुहोस्
अर्को चरण भनेको तपाईको रियल ईस्टेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पैसाको रकमको अनुमान गर्नु हो भिडियो विपणन रणनीति.
तपाईंको भिडियोको गुणवत्ताको बारेमा निश्चित गर्न यो चरण आवश्यक छ। याद गर्नुहोस् कि आकर्षक भिडियोहरू सिर्जना गर्न धेरै उपकरणहरू आवश्यक पर्दछ, र त्यसपछि तपाईंले पर्याप्त बजेट छुट्याउनु पर्नेछ।
यदि तपाईं पर्याप्त बजेट लिन सक्नुहुन्न भने तपाईं निराश हुनु पर्दैन; तपाईं घर बनाएको भिडियो र नि: शुल्क भिडियो सम्पादन सफ्टवेयरको साथ सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
लागतहरू कम गर्न भिडियोहरू सिर्जना गर्न DIY सल्लाहहरू सिक्न प्रयास गर्नुहोस्। तपाईं बिस्तारै प्रीमियम उपकरणहरू र तपाईंको व्यवसायको लागि अधिक पेशेवर भिडियोहरूको लागि जान सक्नुहुन्छ।
एक अद्वितीय शैली परिभाषित गर्नुहोस्
यो अत्यधिक सिफारिश गरिएको छ कि तपाइँको डिजिटल मार्केटिंगमा विशेष शैली तपाइँको भिडियोमा एक अद्वितीय शैली राख्न। यस शैलीमा लगातार रहनाले तपाईंको श्रोताले केही समय पछि तपाईंलाई पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंको शैली, र colors्ग सहित, आवाज को स्वर, कहानी कथन प्रकार, आदि, तपाइँको ब्रान्ड विशेषता प्रस्तुत गर्दछ। श्रोताको व्याख्या गर्न प्रयास गर्नुहोस् तपाईंको श्रोताको ध्यान आकर्षण गर्न। तपाईं आफ्नो भिडियो शैली अप्टिमेट गर्न तपाईंको श्रोताको प्रतिक्रिया पनि लिन सक्नुहुनेछ।
तपाईं आफ्नो सामाजिक मिडिया पोष्टहरूको लागि फिड थिम परिभाषित गर्न सक्नुहुनेछ। यसको मतलब जब एक आगन्तुकले तपाइँको फिड देख्दछन्, पोष्टहरूमा समग्र विषयवस्तु हुन्छ। यो पहिलो भ्रमणमा दर्शकहरूको ध्यान आकर्षण गर्ने राम्रो तरिका हो। उदाहरण को लागी, तपाई निम्नलिखित फिड थिम इन्स्टाग्राममा हेर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, पोष्टहरूले समग्र शैली सिर्जना गर्दछ। तपाईं आफ्नो रियल इस्टेट भिडियो मार्केटिंगको लागि विभिन्न विषयहरू अनुकूलित गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको रियल इस्टेट भिडियोहरू मानवीय बनाउनुहोस्
यो प्रमाणित भएको छ कि तपाईं आफ्ना श्रोताहरूसँग जति धेरै मित्रवत बोल्नुहुन्छ, उच्च स engage्लग्नता दरहरू तपाईंले प्राप्त गर्नुहुन्छ।
यो अझ महत्त्वपूर्ण छ जब यो खरीदको आउँदछ र कन्डो बेच्दै वा अपार्टमेन्टहरू। घर पालना भनेको उत्साहजनक भावनाहरू र व्यवहारहरू समावेश गर्ने उत्तम व्यक्तिगत अनुभवहरू मध्ये एक हो।
त्यसोभए तपाईंले यी भावनाहरू तपाईंको भिडियोहरूमा समावेश गर्न आवश्यक पर्दछ र आफ्ना दर्शकहरूका सबै समस्याहरू विचार गर्दै आफ्ना कथाहरू भन्न आवश्यक छ।
उदाहरण को लागी, उच्च मूल्य र मुद्रास्फीति को बारे मा दर्शकहरु को साथ सहानुभूति प्रयास गर्नुहोस्। सरल शब्दहरुमा भन्नुपर्दा, तपाईले आफ्नो रियल एस्टेट भिडियोहरु मानवीय बनाउनु पर्छ आगन्तुकहरुलाई विश्वास गर्न कि तपाई तिनीहरू जस्तै सोचिरहनु भएको छ।
भिडियो मार्केटिंगका लागि सही प्लेटफार्महरू छनौट गर्नुहोस्
तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि प्रत्येक डिजिटल च्यानलको आफ्नै दर्शक हुन्छ, त्यसैले तपाईंले आफ्नो भिडियोहरू प्लेटफार्ममा साझा गर्नुपर्नेछ जुन रियल ईस्टेटको लागि उपयुक्त छ।
उदाहरण को लागी, लिंक्डइन एक रोजगार उन्मुख सामाजिक च्यानल हो, र धेरै घर जग्गा व्यवसायिकहरु संग तिनीहरु का खाता छ। नतिजाको रूपमा, यो प्लेटफर्ममा तपाईंको भिडियोहरू साझेदारी गर्न तपाईंलाई राम्रो छ।
शीर्ष सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, र ट्विटर तपाईंको भिडियो मार्केटिंगको लागि आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, Instagram फिड पोष्टहरू, कथाहरू, प्रत्यक्ष भिडियोहरू, IGTV, र रीलहरू जस्तै भिडियो मार्केटिंगका लागि धेरै उपयोगी सुविधाहरू छन्। तपाईले यी सुविधाहरू मध्ये अधिकतम अधिकतम एक्सपोजर सम्भव बनाउनको लागि बनाउनु पर्छ।
तपाइँको घर जग्गा भिडियोहरूको तालिका बनाउनुहोस्
भिडियोहरू सामाजिक ट्राफिकको पर्याप्त प्रतिशतको लागि जिम्मेवार छन्। यी धेरै जसो भिडियोहरू ब्रान्डद्वारा सिर्जना गरिएको हो, त्यसैले त्यसो गर्दा तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको अगाडि बढ्न यो महत्त्वपूर्ण छ।
प्रयोगकर्ताहरूको विशाल मात्रामा भिडियोहरूद्वारा बमबारी गरिन्छ, र तपाईंको पत्ता लगाउने सम्भावना धेरै कम छ। तपाईंको दृश्यता बढाउने र तपाईंको भिडियोहरू धेरै प्रयोगकर्ताहरूको आँखामा राख्ने एक तरिका तालिका बनाएर हो।
पीक अनलाइन घण्टा जुनमा अधिकांश व्यक्तिले सामाजिक मिडिया प्लेटफार्महरू प्रयोग गर्दै छन् प्लेटफर्म र उद्योग द्वारा भिन्न हुन्छन्। उदाहरण को लागी, इन्स्टाग्राम मा पोस्टिंग को लागी उत्तम समय ट्विटर भन्दा फरक छ।
त्यसोभए तपाइँ आफ्नो उद्योगको लागि उत्तम समयमा पोष्ट गर्नको लागि सोशल मिडिया तालिका तालिका प्रयोग गर्नुहुनेछ र तपाइँका भिडियोहरूको लागि उच्च सगाई दरहरू पाउनुहुनेछ।
यहाँ प्रयोग गरी तालिका बनाउने उदाहरण हो Crowdfire:
प्रशंसापत्रको शक्ति उठाउनुहोस्
ब्रान्ड प्रतिष्ठा तपाईंको ग्राहकहरू बन्नको लागि प्रोत्साहित गर्ने सम्भावित कुञ्जी हो। यसको लागि एक उपयोगी तरीका भनेको अघिल्लो ग्राहकहरूलाई तपाईंको तर्फबाट कुरा गरेर दिनुहोस्। प्रशंसापत्र एउटा सानो व्यवसायको लागि महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले विश्वास ल्याउँदछ र नयाँ सम्भावनाहरूलाई सहज महसुस गर्दछ।
यदि तपाइँको ग्राहकहरु खुशी घर मालिकहरु, तिनीहरूले तपाइँको ब्रान्ड को उच्च बोल्ने संभावना छ। तपाईंले उनीहरूसँग जडित रहनु आवश्यक पर्दछ र तपाईंको प्रशंसापत्र अभियानलाई प्रोत्साहन गर्न पनि। तिनीहरूको प्रशंसापत्र भिडियोहरू तपाईंको वेबसाइटको गृहपृष्ठमा राख्नको लागि उनीहरूलाई उनीहरूको विचारहरू महत्त्वपूर्ण छन् भनेर बताउन कोशिस गर्नुहोस्।
यहाँ युट्यूबबाट राम्रो प्रशंसापत्रको एक उदाहरण छ।
तपाइँका भिडियोहरूको लम्बाइ अनुकूलन गर्नुहोस्
तपाईंको भिडियोको लम्बाइले तपाईंको रीयल एस्टेट भिडियो मार्केटिंगको आरओआई लाई भारी असर गर्न सक्छ। समग्रमा, सामाजिक प्रयोगकर्ताहरूले छोटो र मीठो भिडियोहरू प्राथमिकता दिन्छन्। यसैले छोटो भिडियो सुविधाहरू जस्तै रल्स वा टिकटोक वृद्धिमा छन्।
अवश्य पनि, इष्टतम भिडियो लम्बाई तपाईको उद्योग र तपाईले साझेदारी गरिरहनु भएको प्लेटफर्ममा निर्भर हुन्छ। सुरू गर्नका लागि, तपाईं २-मिनेट भिडियोहरू तपाईंको इष्टतम भिडियो आकार विचार गर्न सक्नुहुनेछ।
साथै, तपाईं यूट्युब र आईजीटीभी जस्तो प्लेटफर्मको लागि लामो भिडियोहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र अन्य भिडियो प्लेटफर्महरूमा ती भिडियोहरूको छोटो संस्करण साझेदारी गर्नुहोस्। यस तरिकाले, तपाईं अन्य दर्शकहरूलाई तपाईंको प्रोफाइल अन्य प्लेटफर्महरूमा जाँच गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको भिडियो मार्केटिंग प्रदर्शन विश्लेषण गर्नुहोस्
दिमागमा राख्नुहोस् कि कुनै रणनीति सदाका लागि परिपूर्ण हुँदैन। एउटा सानो घर जग्गा व्यवसायको रूपमा जुन सुरू हुँदैछ भिडियो मार्केटिंग, तपाइँ तपाइँको रणनीति प्रत्येक अवसर मा संशोधन गर्न आवश्यक पर्दछ।
तपाइँको प्रदर्शन विश्लेषण गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस् र तपाइँको कमजोरी र शक्तिहरु पाउनुहोस्। जब तपाईं राम्रो र सबैभन्दा खराब प्रदर्शन भिडियोहरू चिन्नुहुन्छ, तपाईं तपाईंको भविष्यका भिडियोहरू अनुकूलन गर्न र उच्च आरओआई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यहाँ ट्विटरमा एनालिटिक्स उपकरणको उदाहरण छ।
A / B परीक्षण चलाउनुहोस्
तपाईं भिडियोहरू सिर्जना गर्न कत्तिको राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने कुराको फरक पर्दैन, तपाईंले कुन प्रकारको भिडियो, क्याप्सन, ह्यासट्याग, र अन्य धेरै चीजहरू तपाईंको दर्शकलाई अपील गर्नुहुन्छ भनेर जान्नु आवश्यक छ। A / B परीक्षण एक उपयोगी विधि हो तपाईंको श्रोताको प्रतिक्रिया तपाईंको सामाजिक मिडिया / वेबसाइट पोष्टहरूमा बिभिन्न आईटमहरूमा बुझ्ने।
उदाहरण को लागी, तपाइँ एक विशेष भिडियो को लागी तपाइँको hashtag परिवर्तन गर्न को लागी र तपाइँको सामाजिक अनुयायीहरु को प्रतिक्रिया लाई ट्र्याक गर्न दुबै संस्करण पठाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईंको दर्शकहरूको रुचि अनुसार तपाईंको पोष्टहरू अनुकूलन गर्न उत्तम तरिका साबित भएको छ।
प्रकटीकरण: Martech Zone का लागि एक सम्बद्ध लिंक समावेश छ Crowdfire.
टैग: ab testब्रान्ड प्रतिष्ठाभीड आगोग्राहक प्रशंसापत्र भिडियोग्राहक प्रशंसापत्रह्यशट्यागअचल सम्पत्तिघर जग्गा मार्केटिंगघर जग्गा प्रशंसापत्रघर जग्गा भिडियोरियल्टर भिडियोप्रशंसापत्र भिडियोट्विटर एनालिटिक्सभिडियो क्याप्शनभिडियो लम्बाईभिडियो मार्केटिंग